डवल कम्युनिस्ट पार्टी र संशोधनवाद – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
- घननाथ सापकोटा
विश्व कम्युनिस्ट विचारको जन्म सँगसँगै तीन खाले गलत विचारको जन्म पनि भयो । उक्त विचारले विश्व कम्युनिस्ट विचारमाथी हमला गर्न थाल्यो । ति तीन विचारहरु निम्न छन ।
१. उग्रवामपन्थी भड्काउ विचार ।
२. जडसुत्रवादी तथा संकिर्ण विचार ।
३. संशोधनवादी तथा नवसंशोधनवादी विचार ।
आजसम्म पनि यी तीन विचारका विरुद्ध संसारभरमा वास्तविक क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु लडीरहेका छन । यि तीन गलत विचारहरुको वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी र विचारलाई समाप्त पार्ने उद्देश्य रहन्छ ।
१. उग्र वामपन्थी भडकाव विचार–
यो विचार रुपमा खुव क्रान्तिकारी देखीने अति क्रान्तिकारी कुरा गर्ने एकाध जनतानै अश्चर्यमा पार्नेखालका घटनाहरु घटाउने एकाध दुश्मनको अखडामा फौजी हमला गर्न र दुश्मनलाई उत्तेजनामा ल्याउने काम गर्दछ । यसले फौजी गैह्र फौजी शहर गाउँलाई तालमेल मिलाएर प्रधान र सहायक कुनलाई जोडदिने कुनलाई ध्यान दिने भन्ने कुराको ख्याल राख्दैन । कुन समयमा कहाँ निशाना लगाउने भन्ने कुराको वैज्ञानिक नहुँदासम्म क्रान्तिकारी वनीरहन,े टिकीरहने दिर्घकालिन सोच र योजना निर्माणमा ध्यानदिनुको सट्टा सिघ्र विजयको सोचबनाएर योजनाहरु बनाउँछ । समाजका अगाडी आफुलाई युद्ध सरदारको रुपमा खडाहुन मनपराउँछ । यो खालको विचार अन्तमा दुश्मनको दमन खेप्न सक्दैन सिघ्ररुपमा सफलता हात लाग्दैन त्यसपछी विस्तारै प्रतिक्रियावादमा पतनहुन जान्छ ।
२.जडसुत्रवादी तथा संकिर्ण विचार
यो विचार ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण नगर्ने समय सापेक्ष क्रान्तिको विकास नगर्ने अन्धनक्कल गर्न खोज्ने आफुभन्दा अरु कसैलाई पनि क्रान्तिकारी न देख्ने क्रान्तिकारी विचार लागुगर्दा श्रृजनशीलता नअपनाउने आदि आदी को प्रतीनिधित्व यस विचारले गर्दछ ।
३.सशोधन तथा नवसशोधनवादी विचार
यस विचारले ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषाण गर्ने नाममा सृजनशीलताको नाममा माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद विचारलाई छाडेर क्रान्तिकारी आत्मलाइनै मारेर म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने ठान्ने र प्रतिक्रियावादीहरुले अवलम्वन गरेको बाटो अपनाउनु यसको उद्देश्य रहन्छ । अन्तत यो विचार प्रतिक्रियावादमा पतन हुन पुग्दछ । वर्तमान समयमा विश्व कम्युनिस्ट अन्दोलनमा यि तीन थरीका विचार मध्ये संशोधनवादी विचारनै बढी खतराको रुपमा देखापरेको छ । संसारमा जहाँ जहाँ क्रान्तीका ज्वारभाटाहरु उठ्छन त्यहाँ त्यहाँ संशोधनवाद पुगेर हमला गर्न थालिहाल्छ । यसका विरुद्ध संघर्षलाई शसक्त बनाउन आवश्यक हुन आउँछ । जसका विरुद्ध माक्र्स, ऐङगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ जस्ता विचारहरुले संशोधनवाद माथी विजय प्राप्त गर्दै अगाडी बढेको इतिहास हाम्रा सामु छ । एक्काईसौँ शताव्दीमा संशोधनवादी विचारलाई परास्त गर्दै क्रान्तिको विकास गर्नु क्रान्तिकारीहरुको प्रमुख जिम्मेवारी हुन आएको छ । त्यो जिम्मेवारी कुसलता पूर्वक हामीले पुरागर्नु पर्दछ । नेपालको हकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले नेतृत्व गरेको छ । वर्तमानमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा डवल कम्युनिस्ट पार्र्टी ले गरेको छ । यस पार्टी ले आफ्नो नाम डवल कम्युनिस्ट पार्र्टी राखेको छ । उ सँग कम्युनिस्टको थोरै गन्धपनि छैन । जसको पुच्छर छैन उसैको नाम चम्रे भने जस्तो, यसको प्रमुख काम नेपालको कम्युनिस्ट विचार आन्दोलनलाई सिध्याएर संशोधनवाद हुँदै अन्तमा प्रतिक्रियावादमा पतन हुनु हो ।
वर्तमान डवल कम्युनिस्ट पार्र्टीको झण्डै दुइतिहाइ को सरकार छ । उसले चाहने हो भने देश र जनताको लागी ठुलाठुला निर्णयहरु गर्न सक्दछ । देशलाई सम्रिद्धीको बाटोमा अगाडी बढाउन सक्दछ तर यो सरकारले गर्दैन कारण यसको बाटो नै संशोधनवादी बाटो हो । यसले राष्ट्रियता र जनजीविका सम्बन्धी खेलेको भूमिका यस प्रकार छ ।
कम्युनिस्ट नामको वहुमतको सरकार छ । भारतले नेपाली भूमीमा सडक निर्माण गर्दछ । अन्तराष्ट्रिय कानून मिचेर सिमानामा बाँध बाँधेर नेपाली वस्ती डुवानमा पार्दछ, सिमाना मिच्दछ हुँदा हुँदै नेपाली भूमीनै आफ्नो राजनैतिक नक्सामा पारेर नेपालमाथी हस्तक्षेपका श्रृङ्खलाहरु एकपछी अर्र्को बढाउँदा यो सरकार एक शब्द बोल्ने हैसियत राख्दैन रमिते बनेर वसीराखेको छ । यदि यो कम्युनिस्ट सरकार हुन्थ्यो भने विदेशीहरुले हाम्रो राष्ट्रियता माथि टेक्ने कुरा त के नजर लगाउन पनि सक्ने थिएनन ।
देशमा उद्योग धन्दाहरु खोल्ने देशका सबै प्राकृतिक सम्ंपत्तीहरु राष्ट्रियकरण गर्ने आर्र्थीक रुपमा देशलाई मजवुत बनाउने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरेर समान वितरण प्रणालीबाट जनतालाई ढुक्क र सुखसँग जिवन जिउन पाउने वातावरण तैयार गर्नु पर्नेमा सबै प्राकृतिक श्रोत साधन कौडिको मल््यमा दलालहरुलाई सुम्पने दलाल अर्थतन्त्र को विकास गर्ने । सबै उद्योग धन्दा शिक्षा स्वास्थ्य निजी क्षेत्रलाई सुम्पेर देशलाई कङ्गाल बनाएर जनतालाई कस्टकर जिवन जिउन वाध्य पारिएको छ । नेपालीलाई एकपेट खान र एकसरो लाउन विदेश भासिन पर्ने अवस्था श्रृजना गराईएको छ ।
कुनै पनि देशले कस्तो शिक्षा प्रणाली अवलम्वन गरेको छ । त्यमका अधारमा त्यस देशको विकास र समाजको वनावट स्पस्ट हुन आउँदछ । शिक्षा वैज्ञानीक सँग–सँगै व्यवहारीक र सबै जनताको पहुँचमा हुनुपर्दछ । शिक्षामा राज्यको पूर्णरुमा दायीत्व हुनुपर्दछ । यहाँ डवल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । दुईखाले शिक्षानीति छ । हुने पुग्नेका लागी बोर्डीङ्ग शिक्षा सर्वसाधारणको लागी सरकारी विद्यालय, जहाँ राज्यको तर्फबाट कुनै ध्यान दिईएको छैन । विस्तारै शिक्षा निजि क्षेत्रलाई सुम्पेर सरकार दायीत्वबाट पन्छीन खोज्दैछ ।
सुरक्षा भनेको अति संवेदनशील निकाय हो । जव जनताको जिउधनको सुरक्षा हुन सकेन भने जनताको ठुलो क्षति हुन्छ । जनता ढुक्क र सुखसँग बाँच्न सक्दैनन । जनताहरु ठुलो संख्यामा हताहती हुने पलायन हुने अवस्था आउँदछ । यहाँ डवल कम्युनिष्ट पार्टी को सरकार छ, न देशको सुरक्षा छ न जनताको सुरक्षा छ । देशमाथी दिनदिनै विदेशीले अतिक्रमण गरेको छ । अर्र्को देशमा ठूलोमात्रामा हताहती भएको छ । सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेको पुलिस प्रशासन मौन छ । अन्याय पूर्ण तरिकाले जनता मरीरहेका छन । प्रहरी प्रशासन उजुरीसम्म पनि लिनमान्दैन किटानी जाहेरि बुझ्न मान्दैन । उदाहरणका लागि चितवन माडी नगरपालिका ७ गोपालनगरका युवा गौरव थापालाई २०७६ आषाढ ३२ गते एक हुललठैतहरुले कुटेर मारेर पोखरीमा फालिदए । पीडीतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन अए तर प्रहरी उजुरी लिन मान्दैन यो त एक प्रतिनिधीमुलक घटनामात्र हो । निर्मला हत्याकाण्ड, रुकुमको चौरजहारी नवराज वि.क. लगायत ६ जनाको नरसंहार, रौतहट हत्याकाण्ड, रुपन्देहीको कान्छी बजार हत्याकाण्ड कति हो कती ।
कुनै पनि देशको सरकारले आफ्नो देशको जनताको लालन पालनको लागि रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ । जनता ढुक्कसँग आफ्नो देशमा काम पाएर के खाने होला के लाउने होला भन्ने समस्याबाट मुक्त हुन पाउनुपर्दछ । अझ कम्युनिस्ट पार्टी को सरकारले त यो विषयमा बढी भन्दा बढी जिम्मेवार हुनपर्दछ । तर यहाँ डवल कम्युनिस्ट पार्र्टीको सरकार छ, तर जनताहरु रोजगारको लागी विदेश भासिन परेको अवस्था छ । दैनिक १५–१६ वटा लास देशमा भित्रिई रहेको छ । यही हो डवल कम्युनिस्ट पार्टी को सरकारको जिम्मेवारी ?
च.भ्रष्टाचार नातावाद कृपावाद
कुनै पनि सरकारले भ्रष्टाचार नातावाद र कृपावाद भन्नेकुरा गर्नै हुँदैन । कम्युनिस्ट सरकारले त यसलाई सदाको लागी अन्त्य गरेर देशलाई भ्रष्टाचर मुक्त बनाउन पर्दछ । संपुर्ण जनतालाई समान अधिकार समान व्यवहार गर्नु पर्दछ । यहाँ डवल कम्युनिस्ट पार्र्टीको सरकार छ भ्रष्टाचार दिन दुइगुणा रात चौगुणा बढेर गएको छ । सरकारका मन्त्रीहरुनै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुवेकाछन । गोकुल वास्कोटा, भानुभक्त ढकाल, मरेर गए पनि रविन्द्र अधिकारी आदी आदी । नातावाद र कृपावाद त्यस्तै छ विभिन्न अयोग गठन गरेर आफ्ना मान्छेलाई पदमा पुर्याउने आफ्ना छोरा छोरी बुहारीलाई पदमा पुर्याउने र राज्यको दोहन गर्ने काम डवल कम्युनिस्ट पार्टी मा उत्कर्षमा पुगेको देख्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जम्वो बनाएर देश लुट्ने प्रचण्डका छोरा बुहारी ज्वाइँ पदमा पुर्याउनै पर्ने कम्युनिस्ट विचारमा शोभानीय काम होइन । यो सरकारले राष्ट्रपती, प्रधानमन्त्री देखी साधारण जनतासम्मको संपत्ती छानविन किन गर्दैन ?
यी सवै गलत काम डवल कम्युनिस्ट पार्टी ले किन गर्दछ त भनेर विचार गर्दा उ सशोधनवादी पार्टी हो । संशोधनवादले यस्तै यस्तै क्रियाकलाप गर्दै प्रतिक्रियावादमा पतन गराउने उसको काम कर्तव्य हो यो जानि राख्दा ठिक होला ।